किन गर्यो सरकारले यार्सागुम्बा संकलन बन्द ? – Nepal News
किन गर्यो सरकारले यार्सागुम्बा संकलन बन्द ?
रुकुम, वैशाख २४ । जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिकामा पाइने यार्सागुम्बा तीन वर्षका लागि संकलन बन्द गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस रक्तचन्दन तथा यार्सागुम्बासहित २ जना पक्राउ
गत वर्ष यहाँ रु ६० लाख बराबरको यार्सा संकलन भएको थापाले जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रलाई संरक्षण गरी गुणस्तरीय र धेरै यार्सा पाइने ठाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । यहाँ वर्षौअघिदेखि यार्सा संकलन गर्न लागिएको हो ।
पहिला पहिला प्रत्येक वर्ष यार्सा संकलन हुँदै आएको थियो । प्रत्येक वर्ष यार्सा संकलन गर्दा यार्सा नै लोप हुन थालेपछि तीन वर्षपछि यार्सा संकलन कार्य शुरु गरिएको स्थानीयवासी शशिराम विकले बताउनुभयो ।
ट्याग्स: rukum, यार्सागुम्बा